Ithegi: BBH | Martech Zone
Ukupapashwa kweNiche kusaqhubeka nokuqhuba umxholo ojolise kakhulu kumaqela ahlukeneyo. Ngelixa ucofa ucofe-kunqakraza, ubambiswano kunye neenkqubo zesibhengezo sesibhengezo siqhubeka nokulawula intengiso yenkqubo yabo elula yoku-odola kunye neendleko eziphantsi kwokhokelo ngalunye, bahlala benqakrazo olusezantsi kunye nenqanaba lokuguqula. Ngenxa yokuba zingabizi, banako ukuvuna umvuzo omangalisayo kunye nembuyekezo eqinileyo kutyalo-mali kubathengisi. Cinga ngokhangelo lwakho kunye nokuziphatha kophando. Njengoko ndijonga kum